ဗီယက်နမ်မှာလူကြိုက်များပြီး လက် မလည်အောင် ရောင်းကောင်းနေတဲ့ အိမ်မြှောင်ထမင်းကြော်
လူတွေရဲ့ စိတ်ခံစားမှုအခြေအနေတွေကို ပြသနေတဲ့ အိမ်တွင်းရှုပ်ထွေးညစ်ပတ်မှု (၇)မျိုး
နိုင်ငံတိုင်းမှာ နေရာဒေသအလိုက် ဒေသထွက် အစားအစာဆိုတာရှိကြပြီး များသောအားဖြင့်တော့ လူကြိုက်များကြပါတယ်။ ဘယ်ဒေသမှာတော့ ဘယ်လို အစားအစာတွေက ကောင်းတယ်ဆိုတာ လူတိုင်းသိကြပြီး အလည်အပတ်သွားတဲ့အခါတော့ ထိုဒေသရဲ့ နာမည်ကြီးအစားအစာကို လက်ဆောင်အဖြစ် ဝယ်ယူတာမျိုး၊ စားသုံးတာမျိုး ပြုလုပ်တတ်ကြပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ အချို့အစားအစာတွေက အရမ်းကို စိတ်လှုပ်ရာစဖွယ်ကောင်းပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကိုယ်တွေဒေသမှာ လုံးဝမစားဘဲ ရွံ့စရာ၊ ကြောက်စရာလို ထင်ထားတဲ့အရာတွေက အခြားဒေသမှာတော့ အကြိုက်ဆုံးအစားအစာတစ်ခုအနေနဲ့ စားသုံးနေကြလို့ပါပဲ။ ယခုလည်းဗီယက်နမ်က အစားအသောက် ပုံတွေ ကြောင့် ဗီယက်နမ်လူမျိုးတွေကို အစားအသောက် ပက်စက်တယ်ဆိုပြီး ဝေဖန်မှုတွေ ရှိလာခဲ့ပါတယ်။
ယခုတလော ဗီယက်နမ်မှာ လက်မလည်အောင် ရောင်းကောင်းနေတဲ့ အရာကတော့ အိမ်မြှောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ အိမ်မြှောင်ဟာ စျေးကွက်မှာ စျေးကောင်းရရှိပြီး အိမ်မြှောင်ကြပ်တိုက်ကင်၊ အိမ်မြှောင်ကြော် ဆိုပြီး ထမင်းနဲ့ တွဲဖက်ရောင်းချလျှက်ရှိပါတယ်။ အသားငါး၊ ငါးခြောက်လိုမျိုး ကုန်သည်တွေဟာ သိုလှောင်ပြီး စီးပွားဖြစ်ရောင်းချမှုတွေလည်းရှိပါတယ်။
အခြားသူတွေအတွက်တော့ အိမ်မြှောင်တစ်ကောင် ဟင်းခွက်ထဲကျသွားရင် ရွှံ့ရှာမှန်းတီးပေမဲ့ ဗီယက်နမ်တွေ အတွက်တော့ အိမ်မြှောင်ကို တကူးတက အခြောက်လှန်းပြီး မုန့်ပဲ သရေစာတစ်ခုလို မြိန်ရေ ရှက်ရည် စားသုံးနေကြတာတော့ တကယ့်ကို အံ့သြစရာပါပဲ။ ကဲ! မိတ်ဆွေတို့ရော ဒီလို အစားအသောက်မျိုး စားဖို့အစီအစဉ်ရှိကြလား?
ဗီယက္နမ္မွာ လူႀကိဳက္မ်ားၿပီး လက္မလည္ေအာင္ ေရာင္းေကာင္းေနတဲ့ အိမ္ေျမႇာင္ ထမင္းေၾကာ္
နိုင္ငံတိုင္းမွာ ေနရာေဒသအလိုက္ ေဒသထြက္ အစားအစာဆိုတာရွိၾကၿပီး မ်ားေသာအားျဖင့္ေတာ့ လူႀကိဳက္မ်ားၾကပါတယ္။ ဘယ္ေဒသမွာေတာ့ ဘယ္လို အစားအစာေတြက ေကာင္းတယ္ဆိုတာ လူတိုင္းသိၾကၿပီး အလည္အပတ္သြားတဲ့အခါေတာ့ ထိုေဒသရဲ့ နာမည္ႀကီးအစားအစာကို လက္ေဆာင္အျဖစ္ ဝယ္ယူတာမ်ိဳး၊ စားသုံးတာမ်ိဳး ျပဳလုပ္တတ္ၾကပါတယ္။
ဒါေပမဲ့ အခ်ိဳ႕အစားအစာေတြက အရမ္းကို စိတ္လွုပ္ရာစဖြယ္ေကာင္းပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ကိုယ္ေတြေဒသမွာ လုံးဝမစားဘဲ ရြံ့စရာ၊ ေၾကာက္စရာလို ထင္ထားတဲ့အရာေတြက အျခားေဒသမွာေတာ့ အႀကိဳက္ဆုံးအစားအစာတစ္ခုအေနနဲ႔ စားသုံးေနၾကလို႔ပါပဲ။ ယခုလည္းဗီယက္နမ္က အစားအေသာက္ ပုံေတြ ေၾကာင့္ ဗီယက္နမ္လူမ်ိဳးေတြကို အစားအေသာက္ ပက္စက္တယ္ဆိုၿပီး ေဝဖန္မွုေတြ ရွိလာခဲ့ပါတယ္။
ယခုတေလာ ဗီယက္နမ္မွာ လက္မလည္ေအာင္ ေရာင္းေကာင္းေနတဲ့ အရာကေတာ့ အိမ္ေျမႇာင္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ အဆိုပါ အိမ္ေျမႇာင္ဟာ ေစ်းကြက္မွာ ေစ်းေကာင္းရရွိၿပီး အိမ္ေျမႇာင္ၾကပ္တိုက္ကင္၊ အိမ္ေျမႇာင္ေၾကာ္ ဆိုၿပီး ထမင္းနဲ႔ တြဲဖက္ေရာင္းခ်လၽွက္ရွိပါတယ္။ အသားငါး၊ ငါးေျခာက္လိုမ်ိဳး ကုန္သည္ေတြဟာ သိုေလွာင္ၿပီး စီးပြားျဖစ္ေရာင္းခ်မွုေတြလည္းရွိပါတယ္။
အျခားသူေတြအတြက္ေတာ့ အိမ္ေျမႇာင္တစ္ေကာင္ ဟင္းခြက္ထဲက်သြားရင္ ရႊံ့ရွာမွန္းတီးေပမဲ့ ဗီယက္နမ္ေတြ အတြက္ေတာ့ အိမ္ေျမႇာင္ကို တကူးတက အေျခာက္လွန္းၿပီး မုန္႔ပဲ သေရစာတစ္ခုလို ၿမိန္ေရ ရွက္ရည္ စားသုံးေနၾကတာေတာ့ တကယ့္ကို အံ့ၾသစရာပါပဲ။ ကဲ! မိတ္ေဆြတို႔ေရာ ဒီလို အစားအေသာက္မ်ိဳး စားဖို႔အစီအစဥ္ရွိၾကလား?
လေ့လာမှုအသစ်အရ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဟာ အမျိုးသားတွေရဲ့ဝှေးစေ့အတွင်းမှာ ပုန်းအောင်းနေထိုင်နိုင်တဲ့အတွက် ဒီဗိုင်းရပ်စ်ကိုရင်ဆိုင်ရာမှာ အမျိုးသားတွေရဲ့ဝှေးစေ့ဟာ အားနည်းချက်ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ ဒီလို ပုန်းအောင်းနေထိုင်နိုင်တဲ့အတွက် အမျိုးသားတွေကရောဂါကို ပိုမိုကြာရှည်စွာ ခံစားရပြီး ပိုမိုပြင်းထန်တဲ့ ရောဂါတွေဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ COVID-19ရဲ့ လိင်ခွဲခြားတိုက်ခိုက်မှုကို လေ့လာဖို့ သုတေသနပညာရှင်တွေက အိန္ဒိယနိုင်ငံ မွန်ဘိုင်းမြို့မှာ...